दुर्लभ तस्विर सहित राजेश हमालले स्व. पुर्व राजा बिरेन्द्र आफ्नो घर आएको सम्झिए - www.dthreeonline.com
दुर्लभ तस्विर सहित राजेश हमालले स्व. पुर्व राजा बिरेन्द्र आफ्नो घर आएको सम्झिए
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०७७ समय: ७:४८:४४
ईटहरी/ पुर्व राजपरिवारको हत्या काण्ड भएको अहिले १९ औ वर्ष पूरा भैसकेको छ । तर अहिलेसम्म हत्याको कुनै यथार्थ कारण पत्ता लगाउन सकिएको छैन । हरेक नागरिकको मनमा बस्न सफल भएका स्व. पुर्व राजा बिरेन्द्र वीर बिक्रम शाह लाई धेरैले सम्झिए । यता महानायकको उपाधी पाएका राजेश हमालले पनि सम्झिए ।
उनले फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै ‘राजा बिरेन्द्रको परिवार राज भएको सोफा अझै मेरो घरमा छ । मेरो बुवा र मुवा साथमा’ भनेर स्व. पुर्व राजा बिरेन्द्र भएको केही तस्वीरहरु पोस्ट गरेका छन् । सन् २००१ जुन १ तारिखका दिन राजपरिवारका १० सदस्यको हत्या भयो जसलाई दरबार हत्याकाण्डका नामले चिनिन्छ ।
नेपाली जनताले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा नाटकीय र अकल्पनीय घटनाका रूपमा सुने युवराज दीपेन्द्रले राजा बीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमारी श्रुति, निराजन वीर विक्रम शाह, काका धीरेन्द्र शाह, काकी शान्ति, श्रद्धा, जयन्ती र श्रद्धाका पति कुमार खड्गविक्रम शाहलाई गोली हानी मारे । गोली हानिसकेपछि युवराज दीपेन्द्रले आफैमाथि गोली प्रहार गरेको बताइयो । अर्को दिन अस्पतालमा गम्भीर घाइते रहेका भनिएका युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो र उनका काका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई नायबी अधिकार सुम्पियो । राजपरिवारका सबै सदस्यको सामूहिक अन्तिम संस्कार गरिएको थियो । हेर्नुस् राजेश हमाललए सार्बजनिक गरेका उक्त तस्वीरहरु ।